Sodium Hyaluronate mugadziri, Hyaluronic Acid fekitori, hyaluronan mugadziri - AWA
CHII CHINONZI SODIUM HYALURONATE
Sodium hyaluronate iri munyu unobva kune hyaluronic acid, uine huremu kubva ku3000Da kusvika 2500KDa uye CAS kwete. 9067-16-7. Iyo polymer mucopolysaccharide iyo inogara ichisanganiswa neN-acetylglucosamine uye D-glucuronic acid disaccharide unit. Izvo zvakasikwa zviripo paganda, maziso, majoini, uye dzimwe nhengo uye nhengo dzakabatana. Izvo zvakawanikwa kuti sodium hyaluronate ine zvakawanda zvemuviri mabasa, sekutora chikamu mukunyorova, kunyorovesa, kuporesa maronda, kugadziriswa kwematoni, kubereka patsva, kupindura kwekuzvimba, kukura kwe embryonic, nezvimwe.
Sodium hyaluronate inoshandiswa zvakanyanya mune zvigadzirwa zvekudya, mafuta ezvizorwa, uye mishonga yemishonga. Kuchengeteka kwaro kwakasimbiswa, uye hazviite kukonzeresa kusarudzika nekuti zvakagovaniswa mumuviri wemunhu. Pane nzira mbiri dzekugadzira sodium hyaluronate, kubvisa kubva muhuku yehuku, uye kubereka kwechibereko. Isu tinoshandisa biological Fermentation, isina-GMO, isina mhuka mhuka.
Sodium hyaluronate ndiyo chikamu chikuru chehutachiona hwehunhu hwakadai sevanhu vanopinda mukati mezvinhu, nhengo yemu vitreous, uye mutsinga unobvumirana. Iyo ine akawanda emuviri basa. Kana ikaderera, chirwere chinouya. Saka vanhu vanoishandisa kurapa ophthalmic uye majoini chirwere, kutsvedza kutwasuka, kuporesa maronda, uye nezvimwe.
Sodium hyaluronate yakasarudzika kugoverwa mumuviri wemunhu, iyo inoderera nguva painenge ichifamba. Zvakaratidza kuti vanhu vanogona kuwana sodium hyaluronate nekutora chikafu. Izvo zvinowedzera uye zvakakurumbira kuti vanhu vane hutano hwekuwedzera hutano kuwedzera hutano. Kazhinji inouya nevhithamini, chondroitin sulfate, nezvimwe.
Oligo sodium hyaluronate chigadzirwa chitsva chakagadziridzwa neBio-enzymatic kusvibisa tekinoroji. Huremu hwayo hwemamoleji zviuru zvitatuDa-10,000Da, iyo inobatwa nyore nyore nemuviri wemunhu uye ine yakadzika yekuita moisturizing.
Sodium hyaluronate inogona zvakanyanya kuvandudza iyo bioavailability yemishonga kuburikidza nekurema kwemuviri, membrane kuwirirana, uye kusanganisa nemishonga. Zvakanakira zvaro zvisina kufananidzwa nezvimwe zvinhu zvepolymer. Izvo zvinogonawo kuchinjiswa nekuyananisa-kubatanidza uye kugadzirisazve kuwedzera nguva yekuchengetedza mumaziso uye kuwedzera kuwedzera bioavailability yemushonga.
Mu-cosmetic Paris 2019
DZOKA ZVAKANAKA 2020.8
Beach TEAM-KUVAKA 2020.7
SHANDONG AWA BIOPHARM CO, LTD. yakavambwa musi waChikunguru 15, 2010. Iyo kambani parizvino ine zvinhu zvakaringana zvemamiriyoni zana emamiriyoni eYuan, ine vashandi vanopfuura zana. Uwandu hwegore negore hwakatenderedza 130MTs pari zvino, kusanganisira 100MTs dze cosmetic uye chekudya giredhi HA, 20MTs ye oligo HA, 10MTs yeziso inodonha giredhi HA uye 3MTs yejekiseni giredhi HA. Neruzivo rwepamberi rwekugadzira, yakakwirira zvigadzirwa, uye yakanaka mushure mekutengesa, tinokunda mukurumbira wakanaka uye kuvimba kubva kune vatengi.
Mushure memakore gumi 'kuedza kukuru, isu takanyora paNew Vatatu Bhodhi (Hodhi rekodhi: 832607) uye takawana zvitupa zvakawanda uye zvinodiwa, zvakaita se ISO9001, DMF, NSF, KOSHER, HALAL, ECOCERT, COSMOS, Drug Kugadzira License, Chitupa chePamusoro- tech Enterprise, nezvimwewo Uye isu tinoramba tichikura nekuvandudza. Izwi rakaoma, ramangwana rakajeka rinouya.
NO.488 Huanghe12 Road, Binzhou guta, ShandongProvince, China
Chikafu chegumi HA
Chigadzirwa chegiredhiti HA
Ziso rinodonha giredhi HA
In injion giredhi HA
Tangazve kugadzirwa 2020.8
Boka revashandi-kuvaka 2020.7
Zvitupa Zvakagadziridzwa (2020/6/23)
COA Kudzokorodza Chirevo
LOGO Shandura Chirevo
Oligo sodium hyaluronate , Eye anosiya yavaibvisa giredhi hyaluronate, Jekiseni yavaibvisa giredha hyaluronate